ကျောက်ကပ်မကောင်းဘူးဆိုတာ သိနိုင်တဲ့အချက် ၇ ချက် -
ကျောက်ကပ်မကောင်းဘူးဆိုတာ သိနိုင်တဲ့အချက် ၇ ချက်
ကျွန်မတို့ရဲ့ ဦးနှောက်နဲ့စိတ်က သတင်းအချက်အလက်ပေါင်းများစွာ လက်ခံရရှိနေပါတယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်း ထောင်ပေါင်းများစွာသော လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြုလုပ်နေရပါတယ်။ ဒီလိုရှုပ်ထွေးလှတဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာရှင်သန်နေရတဲ့ကျွန်မတို့အဖို့ ခန္ဓာကိုယ်ကပို့လာတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တစ်ခုခုကို မသိလိုက်ဘဲလွဲချော်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျောက်ကပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ကိုယ်ကသတိမူပြီးသိနိုင်ဖို့ ဒီသတိပေးချက်တွေကို သတိထားကြည့်ပါဦး။
ကျောက်ကပ်ဟာ သူ့လုပ်ငန်းတာဝန်ကို ပုံမှန်အတိုင်းမထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အခါသိသာတဲ့လက္ခဏာရပ်တွေရှိပါတယ်။ ဒါဟာ ဆီးကတဆင့်အဆိပ်အတောက်တွေကိုမစွန့်ထုတ်ဘဲ သွေးထဲမှာအဆိပ်တွေကျန်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အဆိပ်အတောက်တွေများလာလေလေ အိပ်ပျော်ဖို့ခက်လေလေပါပဲ။ အိပ်ချိန်နည်းပြန်ရင်လည်း ကျောက်ကပ်ရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်ခြေကျဆင်းလာပါတယ်။
ကျောက်ကပ်မှာပြဿနာရှိတဲ့သူတွေဟာ ယေဘုယျအားဖြင့် အိပ်ပျော်ဖို့ခက်တဲ့လက္ခဏာရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါအပြင် အိပ်နေချိန်မှာတချက်တချက် အသက်ရှူရပ်တဲ့အခြေအနေကို ရင်ဆိုင်ကြရပါတယ်။ ဒီလိုအသက်ရှူရပ်သွားခြင်းဟာ စက္ကန့်အနည်းငယ်မှ တစ်မိနစ်ခန့်ထိကြာတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုရပ်သွားပြီး မူလအနေအထားအတိုင်းအသက်ပြန်ရှူတဲ့အခါ ဟောက်သံအကျယ်ကြီးထွက်လာတတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်တိုက်ဟောက်လေ့ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်သွားပြကြည့်သင့်ပါတယ်။
ခေါင်းကိုက် မောပန်း အားအင်ကုန်ခန်းနေရင်
ကျောက်ကပ်ကောင်းတယ်ဆိုရင် ဗီတာမင် D ကိုထုတ်လုပ်ပြီး အရိုးသန်မာစေဖို့နဲ့ Erythropoietin (EPO) ဆိုတဲ့ဟော်မုန်းကို ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ဒီ EPO ဟော်မုန်းက သွေးနီဥထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ပါတယ်။ ကျောက်ကပ်ကကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်တဲ့အခါ EPO ကိုနည်းနည်းသာထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်းအောက်ဆီဂျင်ကိုသယ်ဆောင်တဲ့ သွေးနီဥတွေအားပျော့လာပြီး မောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ ကြွက်သားနာကျင်ခြင်းနဲ့ ဦးနှောက်ပင်ပန်းခြင်းတွေကိုခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျောက်ကပ်မကောင်းတဲ့သူတွေမှာ သွေးအားနည်းရောဂါရှိတာကတော့ သဘာဝဖြစ်ပါတယ်။ ကျောက်ကပ်ကအလုပ်ပုံမှန်လုပ်မယ်ဆိုရင် သွေးနီဥ ၂၀% ကနေ ၅၀ % ထိ ထွက်ရှိလာပါတယ်။ ကောင်းကောင်းအိပ် ကောင်းကောင်းစားပေမယ့် မောပန်းနွမ်းနယ်နေတုန်းပဲဆိုရင် ဒါဟာ ကျောက်ကပ်ပြဿနာဖြစ်နိုင်တာမို့ ဆရာဝန်နဲ့သွားရောက်ပြသသင့်ပါတယ်။
ကျန်းမာတဲ့ကျောက်ကပ်ဟာ အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားပြီး သွေးနီဥဆဲလ်တွေထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် သွေးထဲကိုအရည်များများစီးဆင်းစေပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာ အာဟာရဓာတ်တွေရှိနေစေဖို့အတွက်လည်း ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။ အရေပြား ခြောက်သွေ့ယားယံနေတယ်ဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ သတ္တုဓာတ်နဲ့အာဟာရဓာတ်တွေ မျှမျှတတမရှိတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့အရေပြားကခြောက်သွေ့ယားယံနေတယ်ဆိုရင် ရေပိုသောက်ပါ။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲရေဓာတ်ပြည့်ဝနေဖို့ ဂရုစိုက်ပါ။
တချို့သောဆေးဝါးတွေဟာ ကျောက်ကပ်ကိုပျက်စီးစေတာမို့ ဆေးတစ်ခုခုသောက်တော့မယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးမှသောက်သင့်ပါတယ်။
သွေးထဲမှာအညစ်အကြေးတွေရှိနေရင် အစားအသောက်ရဲ့အရသာကိုလည်းပြောင်းစေသလို လျှာရဲ့အရသာခံနိုင်စွမ်းကိုလည်းပြောင်းလဲစေပါတယ်။ ဒါအပြင် ခံတွင်းနံ့ဆိုးလည်းထွက်ပါတယ်။ ခံတွင်းနံ့ဆိုးထွက်ခြင်းကလည်း ခန္ဓာကိုယ်တွင်းအဆိပ်အတောက်များနေခြင်းနဲ့ သွေးလည်ပတ်မှုမကောင်းခြင်းလက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်သိသာတဲ့ လက္ခဏာရပ်တွေကတော့ အသားတွေမစားချင်တော့ဘူး အစားအသောက်ပျက်လာတတ်ပါတယ်။ သိသိသာသာဝိတ်ကျလာတတ်ပါတယ်။ ဒီလို အချက်တွေကိုကြုံနေရပြီဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ပြသသင့်ပါတယ်။
ကျောက်ကပ်မကောင်းခြင်းနဲ့အသက်ရှူမဝခြင်းကဆက်စပ်နေပါတယ်။ ကျောက်ကပ်စွမ်းဆောင်ရည်ကျလာတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်ထဲအရည်တွေဟာ အဆုတ်ဆီသို့သွားပါတယ်။ သွေးအားနည်းတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းအောက်ဆီဂျင်လှည့်ပတ်မှုကိုပိတ်ဆို့ပြီး အသက်ရှူမဝခြင်းကိုဖြစ်စေပါတယ်။ အသက်ရှူမဝတဲ့လက္ခဏာရပ်တွေဟာ ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းကြောင့်သာမကပန်းနာရင်ကျပ် ၊ အဆုတ်ကင်ဆာနဲ့ နှလုံးရောဂါတွေရဲ့ လက္ခဏာရပ်ပါဖြစ်နေနိုင်တာမို့ ဆရာဝန်နဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြသသင့်ပါတယ်။
ခြေကျင်းဝတ် ၊ ခြေဖဝါးနဲ့ လက်များရောင်ရမ်းလာရင်
ကျောက်ကပ်ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အရည်တွေ အဆိပ်တွေကိုမစစ်ထုတ်တဲ့အခါ အရည်စုခြင်း Sodium Retention ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး ခြေကျင်းဝတ် ၊ ခြေထောက်နဲ့ လက်တွေကို ရောင်ရမ်းလာစေပါတယ်။ ဖောလာစေတယ်လို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းမှာ အရည်စုနေခြင်း ဖောရောင်နေခြင်းဟာ အသည်းနဲ့နှလုံးမကောင်းခြင်း ဒါမှမဟုတ် ခြေထောက်သွေးပြန်ကြောမှာ ပြဿနာရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အငန်လျှော့စားခြင်း ကိုယ်တွင်းအရည်ပိုတွေကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့် ဒီပြဿနာကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ မထူးခြားဘူးဆိုရင်တော့ သီးခြားကုသမှုခံယူရမှာပါ။
ခါးနာတဲ့နေရာမှာ ညာဘက်နံရိုးအောက်မှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန်နာကျင်နေရင် ဒါဟာကျောက်ကပ်ပြဿနာပါ။ ရှေ့ခြမ်းမှာတော့ ပေါင်ခြံမှာပါနာကျင်နေတတ်ပါတယ်။ နေမကောင်းဖြစ်ခြင်း ၊ လေပွခြင်း ၊ ကိုယ်အပူချိန်မြင့်တက်ခြင်း ၊ ဆီးခဏခဏသွားခြင်း တွေပါ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ခါးနာတိုင်း ကျောက်ကပ်ပြဿနာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျောက်ကပ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ခါးနာခြင်းက နေရာတိတိကျကျမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပုံမှန်ခါးနာပျောက်ဆေးတွေက အလုပ်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ပြသသင့်ပါတယ်။
ဒီလက္ခဏာတွေအပြင် နောက်ထပ် သိနိုင်တဲ့လက္ခဏာရပ်တွေကတော့ မျက်လုံးတစ်ဝိုက်ဖောင်းအစ်နေခြင်း၊ သွေးဖိအားများခြင်း ၊ ဆီးအရောင်ပြောင်းလဲခြင်း တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ကပြသလာတဲ့ အချက်အလက်တွေကိုသတိထားစောင့်ကြည့်ပြီး တတ်ကျွမ်းတဲ့ဆရာဝန်နဲ့ပြသဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်နော်။
ကြောကျကပျမကောငျးဘူးဆိုတာ သိနိုငျတဲ့အခကျြ ၇ ခကျြ
ကြှနျမတို့ရဲ့ ဦးနှောကျနဲ့စိတျက သတငျးအခကျြအလကျပေါငျးမြားစှာ လကျခံရရှိနပေါတယျ။ ကြှနျမတို့ရဲ့ခန်ဓာကိုယျဟာလညျး ထောငျပေါငျးမြားစှာသော လှုပျရှားမှုတှကေိုပွုလုပျနရေပါတယျ။ ဒီလိုရှုပျထှေးလှတဲ့ ကမ်ဘာကွီးမှာရှငျသနျနရေတဲ့ကြှနျမတို့အဖို့ ခန်ဓာကိုယျကပို့လာတဲ့ သတငျးအခကျြအလကျတဈခုခုကို မသိလိုကျဘဲလှဲခြျောသှားနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကြောကျကပျနဲ့ပတျသကျတဲ့ အခကျြအလကျတှကေို ကိုယျကသတိမူပွီးသိနိုငျဖို့ ဒီသတိပေးခကျြတှကေို သတိထားကွညျ့ပါဦး။
ကြောကျကပျဟာ သူ့လုပျငနျးတာဝနျကို ပုံမှနျအတိုငျးမထမျးဆောငျနိုငျတဲ့အခါသိသာတဲ့လက်ခဏာရပျတှရှေိပါတယျ။ ဒါဟာ ဆီးကတဆငျ့အဆိပျအတောကျတှကေိုမစှနျ့ထုတျဘဲ သှေးထဲမှာအဆိပျတှကေနျြနတေယျဆိုတဲ့အဓိပ်ပါယျဖွဈပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျထဲမှာရှိတဲ့အဆိပျအတောကျတှမြေားလာလလေေ အိပျပြျောဖို့ခကျလလေပေါပဲ။ အိပျခြိနျနညျးပွနျရငျလညျး ကြောကျကပျရဲ့စှမျးဆောငျနိုငျခွကေဆြငျးလာပါတယျ။
ကြောကျကပျမှာပွဿနာရှိတဲ့သူတှဟော ယဘေုယအြားဖွငျ့ အိပျပြျောဖို့ခကျတဲ့လက်ခဏာရှိတတျပါတယျ။ ဒါအပွငျ အိပျနခြေိနျမှာတခကျြတခကျြ အသကျရှူရပျတဲ့အခွအေနကေို ရငျဆိုငျကွရပါတယျ။ ဒီလိုအသကျရှူရပျသှားခွငျးဟာ စက်ကနျ့အနညျးငယျမှ တဈမိနဈခနျ့ထိကွာတတျပါတယျ။ ဒီလိုရပျသှားပွီး မူလအနအေထားအတိုငျးအသကျပွနျရှူတဲ့အခါ ဟောကျသံအကယျြကွီးထှကျလာတတျတာဖွဈပါတယျ။ ပွငျးပွငျးထနျထနျဆကျတိုကျဟောကျလရှေိ့တယျဆိုရငျတော့ ဆရာဝနျသှားပွကွညျ့သငျ့ပါတယျ။
ခေါငျးကိုကျ မောပနျး အားအငျကုနျခနျးနရေငျ
ကြောကျကပျကောငျးတယျဆိုရငျ ဗီတာမငျ D ကိုထုတျလုပျပွီး အရိုးသနျမာစဖေို့နဲ့ Erythropoietin (EPO) ဆိုတဲ့ဟျောမုနျးကို ထုတျလုပျပါတယျ။ ဒီ EPO ဟျောမုနျးက သှေးနီဥထုတျလုပျဖို့အတှကျအရေးကွီးတဲ့ အခနျးကဏ်ဍကပါဝငျပါတယျ။ ကြောကျကပျကကောငျးကောငျးအလုပျမလုပျတဲ့အခါ EPO ကိုနညျးနညျးသာထုတျလုပျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့လညျးအောကျဆီဂငျြကိုသယျဆောငျတဲ့ သှေးနီဥတှအေားပြော့လာပွီး မောပနျးနှမျးနယျခွငျး၊ ကွှကျသားနာကငျြခွငျးနဲ့ ဦးနှောကျပငျပနျးခွငျးတှကေိုခံစားရတာဖွဈပါတယျ။ ကြောကျကပျမကောငျးတဲ့သူတှမှော သှေးအားနညျးရောဂါရှိတာကတော့ သဘာဝဖွဈပါတယျ။ ကြောကျကပျကအလုပျပုံမှနျလုပျမယျဆိုရငျ သှေးနီဥ ၂၀% ကနေ ၅၀ % ထိ ထှကျရှိလာပါတယျ။ ကောငျးကောငျးအိပျ ကောငျးကောငျးစားပမေယျ့ မောပနျးနှမျးနယျနတေုနျးပဲဆိုရငျ ဒါဟာ ကြောကျကပျပွဿနာဖွဈနိုငျတာမို့ ဆရာဝနျနဲ့သှားရောကျပွသသငျ့ပါတယျ။
ကနျြးမာတဲ့ကြောကျကပျဟာ အညဈအကွေးတှကေိုဖယျရှားပွီး သှေးနီဥဆဲလျတှထေုတျလုပျဖို့အတှကျ သှေးထဲကိုအရညျမြားမြားစီးဆငျးစပေါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျတဈခုလုံးမှာ အာဟာရဓာတျတှရှေိနစေဖေို့အတှကျလညျး ထိနျးသိမျးပေးပါတယျ။ အရပွေား ခွောကျသှယေ့ားယံနတေယျဆိုတာ ခန်ဓာကိုယျထဲ သတ်တုဓာတျနဲ့အာဟာရဓာတျတှေ မြှမြှတတမရှိတာကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။ တကယျလို့အရပွေားကခွောကျသှယေ့ားယံနတေယျဆိုရငျ ရပေိုသောကျပါ။ ခန်ဓာကိုယျထဲရဓောတျပွညျ့ဝနဖေို့ ဂရုစိုကျပါ။
တခြို့သောဆေးဝါးတှဟော ကြောကျကပျကိုပကျြစီးစတောမို့ ဆေးတဈခုခုသောကျတော့မယျဆိုရငျ ဆရာဝနျနဲ့တိုငျပငျဆှေးနှေးပွီးမှသောကျသငျ့ပါတယျ။
သှေးထဲမှာအညဈအကွေးတှရှေိနရေငျ အစားအသောကျရဲ့အရသာကိုလညျးပွောငျးစသေလို လြှာရဲ့အရသာခံနိုငျစှမျးကိုလညျးပွောငျးလဲစပေါတယျ။ ဒါအပွငျ ခံတှငျးနံ့ဆိုးလညျးထှကျပါတယျ။ ခံတှငျးနံ့ဆိုးထှကျခွငျးကလညျး ခန်ဓာကိုယျတှငျးအဆိပျအတောကျမြားနခွေငျးနဲ့ သှေးလညျပတျမှုမကောငျးခွငျးလက်ခဏာတှဖွေဈပါတယျ။ နောကျထပျသိသာတဲ့ လက်ခဏာရပျတှကေတော့ အသားတှမေစားခငျြတော့ဘူး အစားအသောကျပကျြလာတတျပါတယျ။ သိသိသာသာဝိတျကလြာတတျပါတယျ။ ဒီလို အခကျြတှကေိုကွုံနရေပွီဆိုရငျ ဆရာဝနျနဲ့ပွသသငျ့ပါတယျ။
ကြောကျကပျမကောငျးခွငျးနဲ့အသကျရှူမဝခွငျးကဆကျစပျနပေါတယျ။ ကြောကျကပျစှမျးဆောငျရညျကလြာတဲ့အခါ ခန်ဓာကိုယျထဲအရညျတှဟော အဆုတျဆီသို့သှားပါတယျ။ သှေးအားနညျးတဲ့အခါ ခန်ဓာကိုယျတှငျးအောကျဆီဂငျြလှညျ့ပတျမှုကိုပိတျဆို့ပွီး အသကျရှူမဝခွငျးကိုဖွဈစပေါတယျ။ အသကျရှူမဝတဲ့လက်ခဏာရပျတှဟော ကြောကျကပျပကျြစီးခွငျးကွောငျ့သာမကပနျးနာရငျကပျြ ၊ အဆုတျကငျဆာနဲ့ နှလုံးရောဂါတှရေဲ့ လက်ခဏာရပျပါဖွဈနနေိုငျတာမို့ ဆရာဝနျနဲ့မွနျမွနျဆနျဆနျပွသသငျ့ပါတယျ။
ခွကေငျြးဝတျ ၊ ခွဖေဝါးနဲ့ လကျမြားရောငျရမျးလာရငျ
ကြောကျကပျကခန်ဓာကိုယျရဲ့ အရညျတှေ အဆိပျတှကေိုမစဈထုတျတဲ့အခါ အရညျစုခွငျး Sodium Retention ကိုဖွဈပျေါစပွေီး ခွကေငျြးဝတျ ၊ ခွထေောကျနဲ့ လကျတှကေို ရောငျရမျးလာစပေါတယျ။ ဖောလာစတေယျလို့လညျးဆိုနိုငျပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျအောကျပိုငျးမှာ အရညျစုနခွေငျး ဖောရောငျနခွေငျးဟာ အသညျးနဲ့နှလုံးမကောငျးခွငျး ဒါမှမဟုတျ ခွထေောကျသှေးပွနျကွောမှာ ပွဿနာရှိနခွေငျးဖွဈပါတယျ။ အငနျလြှော့စားခွငျး ကိုယျတှငျးအရညျပိုတှကေိုဖယျရှားခွငျးဖွငျ့ ဒီပွဿနာကို သကျသာစနေိုငျပါတယျ။ တကယျလို့ မထူးခွားဘူးဆိုရငျတော့ သီးခွားကုသမှုခံယူရမှာပါ။
ခါးနာတဲ့နရောမှာ ညာဘကျနံရိုးအောကျမှာ ပွငျးပွငျးထနျထနျနာကငျြနရေငျ ဒါဟာကြောကျကပျပွဿနာပါ။ ရှခွေ့မျးမှာတော့ ပေါငျခွံမှာပါနာကငျြနတေတျပါတယျ။ နမေကောငျးဖွဈခွငျး ၊ လပှေခွငျး ၊ ကိုယျအပူခြိနျမွငျ့တကျခွငျး ၊ ဆီးခဏခဏသှားခွငျး တှပေါ ဖွဈလာတတျပါတယျ။ ခါးနာတိုငျး ကြောကျကပျပွဿနာတော့မဟုတျပါဘူး။ ကြောကျကပျကွောငျ့ဖွဈတဲ့ ခါးနာခွငျးက နရောတိတိကကြမြှာဖွဈတတျပါတယျ။ ပုံမှနျခါးနာပြောကျဆေးတှကေ အလုပျမဖွဈတော့ဘူးဆိုရငျ ဆရာဝနျနဲ့ပွသသငျ့ပါတယျ။
ဒီလက်ခဏာတှအေပွငျ နောကျထပျ သိနိုငျတဲ့လက်ခဏာရပျတှကေတော့ မကျြလုံးတဈဝိုကျဖောငျးအဈနခွေငျး၊ သှေးဖိအားမြားခွငျး ၊ ဆီးအရောငျပွောငျးလဲခွငျး တို့ပဲဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ခန်ဓာကိုယျကပွသလာတဲ့ အခကျြအလကျတှကေိုသတိထားစောငျ့ကွညျ့ပွီး တတျကြှမျးတဲ့ဆရာဝနျနဲ့ပွသဖို့ တိုကျတှနျးလိုပါတယျနျော။
ကြက်ဥတစ်လုံး စားသင့်တဲ့ အချက် ၇ ချက်
[Zawgyi] ကြက်ဥတစ်နေ့တစ်လုံး စားသင့်တဲ့ အချက် ၇ ချက် ကြက်ဥက ဥတစ်လုံးသာသာလောက်ပဲဆိုပြီး အထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့။ ဥတစ်လုံးသာသာလောက်ပေမယ့် ကြက်ဥတစ်လုံးတည်းမှာ အာဟာရဓာတ်တွေ ကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်။ ဒီ ၇ချက်ကို…
ဆားရေရဲ့ ကောင်းကျုိး(၅) ချက်
ပင်လယ်ရေပဲဖြစ်ဖြစ် အိမ်ကဆားနဲ့ ထည့်ဖျော်ထားတဲ့ ဆားရေပဲဖြစ်ဖြစ် အလှအပရေးရာအတွက်ဆိုရင်တော့ တကယ်ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ အရေပြား ရောင်ရမ်းတာကစလို့ ချောမွေ့နူးညံ့တဲ့ အရေပြားလေးတွေရဖို့ အထိ ကောင်းကျိုးတွေ အများကြီးကို ဆားရေက…
ငိုကြွေးခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးကိုကောင်းစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အချက် ၁၀ ချက်
[Zawgyi] ငိုကြွေးခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးကိုကောင်းစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အချက် ၁၀ ချက် ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ် ဆွေမျိုးသားချင်းတစ်ယောက်ယောက် ငိုကြွေးနေတဲ့အခါမှာ အငိုတိတ်သွားအောင် နှစ်သိမ့်ပေးတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီလိုငိုနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကို…
[Zawgyi] “ငါတော့ ဒီအလုပ်ရောက်မှ ဝလာတယ်” “ကျောင်းတုန်းကပိန်ပိန်လေးနော် ခုဘယ်လိုဖြစ်သွားတာတုန်း” ဆိုတာမျိုးတွေ ကြားဖူးကြမှာပါ။ ကိုယ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ တချို့သောအလုပ်တွေက စားချိန် အိပ်ချိန်မမှန်တာတွေ စိတ်ဖိစီးမှုများလွန်းတာတွေကြောင့် ဝဖီးလာတတ်ကြပါတယ်။ အခုဖော်ပြပေးမယ့်…
စမတ်ကျချင်တဲ့ကောင်လေးတွေသိသင့်တဲ့ဖက်ရှင်စည်းမျဉ်း ၉ ချက်
[ZawGyi] စမတ်ကျချင်တဲ့ကောင်လေးတွေသိသင့်တဲ့ဖက်ရှင်စည်းမျဉ်း ၉ ချက် အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ အရေးကြီးတဲ့ပွဲတွေကိုသွားတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ် အနောက်တိုင်းဝတ်စုံကို စမတ်ကျကျဝတ်ဆင်ရမယ့်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် Formalwear တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှန်ကန်တဲ့စည်းမျဉ်းတွေကို သိထားဖို့လိုပါတယ်။ ခါးပတ်နဲ့ဖိနပ်ကို လိုက်ဖက်ညီပါစေ ကိုယ်က Formal…
ခုခေတ်မှာကလေးတွေဟာ အိမ်ထဲမှာပဲနေတီဗီကြည့် ဖုန်းကြည့်နဲ့ Screen ကြည့်ချိန်များလာသလို အိမ်ပြင်ထွက်ဆော့ရတာနည်းလာတာမို့ မျက်စိအားမကောင်း ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့မျက်မှန်တပ်ရတဲ့ အနေအထားတွေဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့်ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက မှန်ကြောင်လေးတွေမဖြစ်ရအောင် ဘယ်လိုမျိုးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးရမလဲဆိုတာ ကြည့်ကြပါစို့။ မကြာခဏအနားပေးပါ ကလေးအိမ်စာလုပ်နေတဲ့အချိန်…
ဘရာထိန်းသိမ်းနည်း ၄ ချက်
[ZawGyi] ဘရာထိန်းသိမ်းနည်း ၄ ချက် ဘရာ(Bra) ဆိုတာက အမျိုးသမီးတိုင်းအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်သလို အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ဘရာတွေဟာလည်း တန်ဖိုးကြီးပါတယ်။ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ ဘရာတစ်ထည်ကိုအနည်းဆုံးသောင်းကျော်ပေးပြီး ဝယ်ယူရလေ့ရှိတာမို့ တစ်လနှစ်လနဲ့ရွဲသွားတာမျိုးလည်း မဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းတတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီတော့…
ပျော်ရွင်ဖို့နဲ့ အောင်မြင်ဖို့ အလီဘာဘာလုပ်ငန်းစုရဲ့ တည်ထောင်သူ Jack Ma ရဲ့ အကြံပေးချက် ၇ ချက်
အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပြီး ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်တဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးလုပ်ငန်းစုကြီးတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အလီဘာဘာလုပ်ငန်းစု (Alibaba Group)ရဲ့ တည်ထောင်သူဖြစ်တဲ့ Mr. Jack Ma ဟာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အချမ်းသာဆုံးသူဌေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး…
[ZawGyi] အဖြူရောင်အစက်အပြောက်တွေက ပြနေတဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ကျွန်မတို့တွေရဲ့ လက်သည်းခွံမှာ အဖြူရောင်အစက်အပြောက်လေးတွေကို တစ်ခါတစ်ရံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒီအဖြူရောင် အစက်လေးတွေက မတူညီတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေရှိနေတတ်ပါတယ်။ မတူညီတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အလိုက် ဒီအစက်တွေဟာ ဘာကိုရည်ညွှန်းသလဲ၊ သူကတဆင့်သိနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေး…
သွေးအမျိုးအစားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အချက် ၅ ချက်
တော်တော်များများက ကိုယ့်သွေးအမျိုးအစားဟာ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးနဲ့ ကိုယ့်ဘဝအတွက် ဘယ်လောက်ထိ အရေးပါတယ်ဆိုတာ သိပ်ပြီးသတိမထားမိကြပါဘူး။ ခုပြောပြမယ့် အချက်အလက် အနည်းငယ်ကတော့ သွေးအမျိုးအစားနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိထားသင့်တဲ့အချက်တွေဖြစ်သလို ကျန်းမာရေးလူမှုရေးအတွက် အထောက်အကူပြုစေဖို့ အာမခံပါတယ်။…
ရေမွှေးထုတ်ကုန်သစ်ကို မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို (Cristiano Ronaldo)
[Zawgyi] ရီးရဲမက်ဒရစ်တိုက်စစ်မှူး ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို (Cristiano Ronaldo) ဟာ ထုတ်ကုန်သစ် CR7 Eau de Toilette ရေမွှေးကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ရေမွှေးဟာ ၁၉ပေါင် (၃၃,ဝဝဝကျပ်) ကျင့်သင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပေါ်တူဂီအသင်းနဲ့အတူ နိုင်ငံတကာပွဲတွေမှာ ခြေစွမ်းပြတဲ့ ရိုနယ်ဒိုဟာ လီဗန်တေးအသင်းနဲ့ ရင်ဆိုင်ဖို့ ရီးရဲမက်ဒရစ်အသင်းကို ပြန်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ရိုနယ်ဒိုဟာ ၂ဝ၁၂ခုနှစ်မှာ ဝင်ငွေ ၄၂.၅သန်း၊ ၂ဝ၁၃ခုနှစ်မှာ ဝင်ငွေ ၄၄သန်း၊ ၂ဝ၁၄ခုနှစ်မှာ ဝင်ငွေ ၈ဝသန်း၊ ၂ဝ၁၅ခုနှစ်မှာ ဝင်ငွေ ၇၉.၆သန်း၊ ၂ဝ၁၆ခုနှစ်မှာ ဝင်ငွေ ၈၈သန်းနဲ့ ၂ဝ၁၇ခုနှစ်မှာ ဝင်ငွေ ၉၃သန်းရရှိပြီး ကမ္ဘာ့ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးအားကစားသမားဖြစ်ရုံမက သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကလည်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း၎ဝဝတောင် ရှိနေပါပြီ။ […]
[Zawgyi] စိတ်အင်အားကို ပျိုးထောင်ရအောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပျိုးထောင်တည်ဆောက်လို့ရသလို၊ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်အင်အားကြံ့ခိုင်ကောင်းမွန်ဖို့အတွက်လည်း ပျိုးထောင်လို့ရတယ်ဆိုရင် အချို့ကတော့ လက်ခံပါ့မလားမသိဘူး။ ကျွန်မအနေနဲ့တော့ စိတ်အေးချမ်းစေဖို့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အတွေးနဲ့အမြင်တွေကို ပျိုးထောင်လေ့ရှိသလို၊ နေ့စဉ်ကာလတို ရည်မှန်းချက်လေးတွေထားပြီးတော့လည်း စိတ်အင်အားကောင်းမွန်စေဖို့လည်း ပျိုးထောင်တတ်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ ပြန်လည် မျှဝေဆွေးနွေးချင်ပါသေးတယ်။ စိတ်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ဖို့ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာစွာ တည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုကလည်း အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ ကျန်းမာစွာနဲ့ ရှင်သန်ဖို့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သလို၊ စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း နေ့စဉ် ၁၀ မိနစ် တရားထိုင်တာ၊ သမထထိုင်တာမျိုးတွေလည်း ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။ HUAWEI nova 2i အကြောင်း အသေးစိတ်သိရှိရန် ဝန်တိုမိစ္ဆာမပွားမိစေဖို့ မနာလိုစိတ်ဝန်တိုစိတ်ဟာ ကိုယ့်စိတ်ကို အားနည်းစေတဲ့ကိစ္စမို့ ကျွန်မအနေနဲ့ သတိပြုလေ့ရှိပါတယ်။ သူများမကောင်းကြောင်းမပြောတာ မတွေးတာနဲ့တင် […]
ကိုယ့် Crush လေး စိတ်ဝင်စားလာအောင် ဘယ်လိုဆွဲဆောင်မလဲ ?
ကိုယ့် Crush လေး စိတ်ဝင်စားလာအောင် ဘယ်လိုဆွဲဆောင်မလဲ ? ချစ်လေးတို့ရေ မိန်းကလေးအများစုမှာကိုယ့်ဘက်တစ်ဖက်သတ်သဘောကျနေရတဲ့ ခေတ်စကားနဲ့ ပြောရရင် ကြိတ် Crush နေရတဲ့ ကောင်လေးဖြစ်ဖြစ် ကွီးဖြစ်ဖြစ် ရှိဖူးကြမှပါနော်…။တစ်ခါတလေတော့ အကြိုက်နဲ့အချစ်က မတူဘူးလေ…သူ့စတိုင်လ်နဲ့ သွင်ပြင်ကို ကြိုက်မိတာမျိုး၊ စတိုင်လ်က မမိုက်ပေမယ့် သူ့အကျင့်စရိုက်ကို လေးစားပြီး သဘောကျတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် အကြောင်းအရာ ရှာမရဘဲ ချစ်သွားမိတာမျိုးလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်။ခုခေတ်မှာ မိန်းကလေးတွေဟာအရင်ကထက် လွတ်လပ်ပွင့်လင်းလာပြီ ဆိုပေမယ့် ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကို ချစ်စကား စတင်ပြောဖို့တော့ ခက်ခဲနေကြဆဲ ရှက်ရွံ့နေကြဆဲဖြစ်မှာပါ…(ဒါတောင် ကိုရီးယား မင်းသမီးလေးတွေကို နည်းနည်း အတုယူထားရသေးတာမဟုတ်လား…:P) ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ လက်ရှိမှာ ကိုယ် Crush မိနေတဲ့ ကောင်လေး တစ်ယောက်ရှိပြီဆိုပါစို့ …သူ့ဆီက တူညီတဲ့ […]
Knowledge Lifestyle Motivation
ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်က စာအုပ်ဆိုင်တွေရဲ့ အသက်ရှုသံ
ဖုန်းတစ်လုံးပေါ်မှာ စာဖတ်ရတာနဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုင်ပြီး စာဖတ်ရတဲ့ အရသာက ဘယ်လိုမှမတူနိုင်ပါ။ လူကြီးတွေက မနက်ဆို ကော်ဖီလေးသောက်ရင်း သတင်းစာဖတ်၊ လူငယ်တွေက ဖုန်းလေးပွတ်ရင်း ကော်ဖီသောက် သူ့အကြိုက်နဲ့သူပါပဲ။ နောက်ပိုင်း ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်ရဲ့ရေစီးကြောင်းက အရှိန်ပြင်းလွန်းတော့ လူကြီးတွေ၊ လူငယ်တွေအပြင် ကလေးတွေပါ အကုန်လုံးစီးမျောကုန်ကြပြီလားမသိပါဘူး။ ငယ်ငယ်တုန်းကဆို စာမေးပွဲပြီးရင် အခွေငှားဆိုင်ကနေ အခွေငှားကြည့်မလား၊ စာအုပ်ဆိုင်ကနေ စာအုပ် ငှားဖတ်မလား၊ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ လုပ်ဖြစ်ကြတာပါပဲ။ နောက်ပိုင်း အခွေငှားဆိုင်တွေမှာ မြန်မာကားကြည့်ချင်တဲ့လူလောက်ပဲ လာငှားတော့တယ်။ စာအုပ်ငှားတဲ့ဆိုင်လေးတွေကလည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လူနည်းတာကနေနောက်ပိုင်းရှိကို မရှိတော့တာပါ။ ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်ရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုက ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဘယ်ရုပ်ရှင်ကားကြည့်မလဲ။ လမ်းဘေးမှာ တစ်ခွေကို ငါးရာလောက်နဲ့ လွယ်လွယ်ဝယ်လို့ရတယ်။ ဘာသတင်းဖတ်မလဲ။ သတင်းမီဒီယာအားလုံး Facebook မှာ […]
ကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက် ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခန့်အပ်ရာမှာ တချို့တွေက တစ်ကွက်ကောင်း တစ်ကွက်မကောင်းဆိုသလို တော်တဲ့နေရာတွေရှိပေမယ့် သည်းခံလို့မရတဲ့ လျှော်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ သူတို့တွေရဲ့ ဘယ်လိုအချိုးတွေကို သည်းညည်းခံမနေဘဲ ရှင်းထုတ်သင့်လဲဆိုတာကိုတော့… (၁) ပြဿနာငနဲတွေပါ သူတို့လုပ်ပေးနိုင်တာထက်ပိုပြီး ပြဿနာတွေရှာလာတဲ့အခါ ၊ သူတို့ဖန်တီးပေးခဲ့တာထက် ပိုပြီး ဖျက်ဆီးကြတဲ့အခါ သူတို့ကို ထုတ်ပစ်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပါ။ အဲလိုမှ မဟုတ်ရင် သူ့ပြဿနာတွေကို အမြဲလိုက်ရှင်းနေရပါလိမ့်မယ်။ (၂) ဖောက်သည်တွေကို ဂရုမစိုက်တဲ့သူတွေ အရေးကြီးတာက ဖောက်သည်ဆိုတာရဖို့ခက်ခဲပြီး တစ်ခဏအတွင်းပြန်လည် ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကို အမြဲတမ်း ခေါင်းထဲထည့်ထားရမှာပါ။ ဖောက်သည်တွေနဲ့ အမြဲထိတွေ့နေရပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ ဖောက်သည်တွေရဖို့နဲ့ ဖောက်သည်တွေရဲ့ တန်ဖိုးကိုမသိတဲ့ နားမလည်ကြတဲ့လူတွေနဲ့ တွဲမလုပ်သင့်ပါဘူး။ (၃) အလုပ်ကို အလုပ်နဲ့တူအောင် မလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေ တကယ်တော့ […]
“ရှင် . . . ဟိုဘက်နည်းနည်း တိုးပေးလို့ မရဘူးလား” ရှက်ရွံ့ခံပြင်းနေတဲ့ အသံစူးစူးလေး ကြားလိုက်ရတာနဲ့အတူ ထုံပေပေမျက်နှာထားနဲ့နောက်ဆုတ်သွားတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်…။ ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ ဒီအသံ ဒီမြင်ကွင်း ဒီလိုကားကျပ်တာကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး တဏှာရူးကြသည့် ကိစ္စက တစ်စခန်းထလာကြပြန်ပြီ။ ဒီရက်ပိုင်းမှာ ဒီကိစ္စရပ်တွေကြောင့် မိန်းကလေးတော်တော်များများ စိတ်ဒုက္ခရောက်နေကြရသည်။ ဘတ်စ်ကားပေါ်ကထောက်လှမ်းရေးတွေနဲ့ တွေ့ကြုံရသည့်အမျိုးသမီးအများစုမှာ ပြောရဲဆိုရဲ အော်ရဲသူဆိုလျှင် နည်းနည်းတော်သေးသည်။ အပြောအဆို မရဲလှသေးသည့် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ကောင်မလေးတွေဆိုလျှင်ဖြင့် လှုပ်လို့လည်းမရ ပြောလည်းမပြောရဲသဖြင့် ကားပေါ်ကဆင်းပြီး ရုံးရောက်တော့မှ မျက်ရည်ကျရတာမျိုးတွေ ဒုနဲ့ဒေး။ ဒါတွေကိုယုတ်မာသူတွေက ခံစားတတ်မည်လည်းမထင်။ တကယ်တမ်းတော့ သူတို့တွေမှာ အစ်မ နှမမရှိရင်တောင် အမေရှိသူတွေချည်း။ နှာဘူးကောင်တွေအတွက်တော့ မသိ။ မိန်းကလေးတွေအတွက်တော့ ဒီလိုအချိန်ခဏလေးက […]
Johnny Deep အပါအ၀င် ကျော်ကြားသူတွေရဲ့ စံအိမ်တွေကို ၀ါးမြိုဖို့ရှိနေတဲ့ Irma မုန်တိုင်း
[Zawgyi] လှပတဲ့ သဲသောင်ပြင်တွေ၊ ပူနွေးတဲ့ရာသီဥတုနဲ့ တခြားနေရာနဲ့ ရှုပ်ရှုပ်ယှက်ယှက်မရှိဘဲ သီးခြားလေးဖြစ်နေတာကြောင့် Caribbean အရပ်ဒေသဟာ ချမ်းသာတဲ့လူတွေနဲ့ ကျော်ကြားတဲ့သူတွေအတွက်တော့ နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဒီဒေသမှာ ဇိမ်ခံအိမ်ကြီးတွေကို ဆောက်လုပ်ထားကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Irma မုန်တိုင်းဟာ သူတို့ရဲ့ နေအိမ်တွေကို တစ်နာရီ ၁၈၅ မိုင်နှုန်းနဲ့ တိုက်ခတ်ဖျက်စီးပစ်မှာဖြစ်တာကြောင့် သူတို့ရဲ့အိမ်တွေဟာ ဆိုးဆိုးရွားရွား ပျက်စီးသွားနိုင်ချေ ရှိနေပါတယ်။ ဒီမုန်တိုင်းဟာ Barbuda ကျွန်းကို တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီး လူအသေအပျောက်တွေပါ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ရဲ့ ငါးဧကကျယ်ဝန်းတဲ့ ခြံဝန်းကြီးထဲမှာ ဆောက်ထားတဲ့ ဒေါ်လာ ၁၆.၉ သန်းတန် အိမ်ကြီးဟာလည်း မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ မုန်တိုင်းမိခဲ့တဲ့ အိမ်တွေထဲမှာတော့ ချယ်ဆီးဘောလုံးအသင်းပိုင်ရှင် Roman Abramovich […]
Xiaomi ရဲ့ ထုတ်ကုန်အသစ်ဖြစ်တဲ့ Mi Notebook Air ကို လေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ခြင်း
Xiaomi ရဲ့ Mi Notebook Air ကို August (၂) ရက်ကနေစပြီးတရုတ်ပြည်မှာ ရရှိနိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဈေးကွက်မှာတော့ စတင်ထုတ်ရောင်းမယ့် အစီအစဉ်ကို ပြောကြားထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး ။ ဒီ Notebook အသစ်ဟာ Xiaomi အတွက်နည်းပညာပိုင်းပြောင်းလဲမှုကို ကိုယ်စားပြုနေသလို ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Notebook မှာ Windows 10 အသုံးပြုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ Akhayar ပရိတ်သတ်တွေအတွက် Xiaomi ရဲ့ပထမဆုံးသော Laptop နဲ့ပတ်သတ်ပြီး လေ့လာနိုင်ဖို့ Akhayar.com မှ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Mi Notebook Air ကို Size ၂ မျိုးထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ 12.5 Inches နဲ့ […]
Google Play Store မှာ မြန်မာနိုင်ငံကနေ ဒေါင်းလို့မရတဲ့ Apps တွေ Games တွေကို ဘယ်လိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ကြမလဲ
App တွေ၊ Game တွေကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်မယ်ဆိုပြီး Google Play Store ထဲကို ဝင်ရောက်ရှာဖွေတဲ့အခါ မတွေ့တာတွေ၊ တွေ့ရင်လည်း အဆိုပါ App၊ Game မဟုတ်ပဲ တခြားတလွဲတွေ ဖြစ်နေတာတွေက မြန်မာနိုင်ငံက User အများစုမှာ ကြုံတွေ့နေကျပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ပိတ်ထားတဲ့ ပြသနာကြောင့် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့ခက်နေရင် ဒီ Article ကိုဖတ်ပြီး သင်ခေါင်းစားစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော်နဲ့ အတူတူ လိုက်လုပ်ကြည့်ရအောင်..။ 1) Hotspots Shield အရင်ဆုံး လိုအပ်တာကတော့၊ App တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Hotspot Shield လို့အမည်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အခုလုပ်မယ့် ပုံစံက နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ဆာဗာအချက်အလက်ထဲကို VPN […]
Display အောက်မှာ Fingerprint ထားဖို့ မူပိုင်ခွင့်ရယူလိုက်တဲ့ Samsung Galaxy S9
Display အောက်မှာ Fingerprint ထားဖို့ မူပိုင်ခွင့်ရယူလိုက်တဲ့ Samsung Galaxy S9 Samsung ရဲ့ နောက်နှစ်အစောပိုင်းမှာထွက်ရှိလာမယ့် Galaxy S9 စမတ်ဖုန်းဟာ Fingerprint ကို Screen အောက်မှာ ထားမယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာလိုက်၊ Galaxy S8 လိုပဲ ဖုန်းရဲ့နောက်ကျောဘက်မှာထားမယ်ဆိုပြီး သတင်းတွေမျိုးစုံထွက်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုနောက်ဆုံးသိရတဲ့သတင်းတွေအရတော့ Samsung ဟာ Galaxy S9 စမတ်ဖုန်းမှာ Screen Display အောက်မှာ Fingerprint ထားနိုင်တဲ့ မူပိုင်ခွင့်ကိုရယူလိုက်ပြီလို့ သိရပါတယ်။ အဆိုပါ မူပိုင်ခွင့် Patent အရ အဆိုပါ စမတ်ဖုန်းရဲ့ Screen မှာ လက်ဗွေကိုဖတ်ယူနိုင်မယ့် Pressure Point […]